बलिउड / हलिउड Archives - Page 37 of 42 - Purbeli News
बलिउड गायिका देसाइ भन्छिन् -अबसर माग्दा सबै मसँग सुत्न मात्र चाहन्थे
एजेन्सी । कुनै बेला बलिउडकी चर्चित गायिकाले सनसनीपूर्ण खुलासा गरेकी छिन् । बलिउडमा ‘काष्टिक काउच’अर्थात काम पाउन सहबास गर्नु पर्ने चलन ब्याप्त रहेको भन्दै उनले आफूलाई बलिउड स्टुडियोमा हरेक पटक गिद्धे दृष्टि लगाइएको खुलासा गरेकी हुन् । सुन्दरताका लागि समेत चर्चित गायिका हेमा सरदेसाईले आफूसँग बलिउडमा धेरै डाइरेक्टरहरु सुत्न चाहेको समेत खुलासा ...
भारतीय अभिनेत्री रेखा अपार्टमेन्टमा मृत फेला
एजेन्सी / भारतमा अर्की एक अभिनेत्रीको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । टेलिभिजन अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जीको रहस्यमय मृत्यु भएको १ वर्ष नहुँदै अर्की अभिनेत्री रेखा मोहनको रहस्यमय मृत्यु भएको हो । रेखा मोहन आफ्नो अपार्टमेन्टमा मृत फेला परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । उनी केरलास्थित शोभा सिटी कम्पलेक्सको एक अपार्टमेन्टमा बस्दै आएको समाचारमा उल्लेख ...
बाहुबलीका निर्माताको घरमा आयकरवाला !
कात्तिक २७ । सरकारले नाजायज पैसालाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा आफ्ना कारवाही अघि बढाइरहेको छ । यसै सिलसिलामा आज विहानै आयकरवाला भारतको हैदराबादमा छापा मारेको छ । यही क्रममा प्रदर्शन अघि नै चर्चित बनेको फिल्म ‘बाहुबली –२’ का निर्माताको घरमा पनि छापा मारेको छ । यस फिल्मका निर्माता शोबु यरलागड्डा, प्रसान देवीनेनी हुन । उनको घरबाट सरकारी कारवाही अनु...
एक युवतीले अाफुसंग बिवाह नगरे अात्महत्या गर्छु भनेपछी अक्षयकुमार तनावमा
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता अभिनेताहरु छन् जसका फ्यानहरु अजबगजब हर्कत गर्न रुचाउँछन् । कहिले सलमान खान त कहिले शाहरुख खानका फ्यानहरुको बेलाबेलामा चर्चा भइनै रहन्छ । तर, पछिल्लो पटक अक्षय कुमारले आफ्नो एउटा फ्यानले दिएको सास्तीबारे बोलेका छन् । अक्षय कुमारका अनुसार केही समय अघि एकजना फ्यानले उनलाई निकै परिबन्धनमा पार्ने काम गरिन् । एकजना उनको फ्...
बलिउडकी चर्चित नायिका श्रुति हसनलार्इ अायाे ज्यान मार्ने धम्की : अाखिर कस्ले दियाे त्याे धम्की
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री श्रुती हसनले आफुलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएकी छिन् । उनले करनाटाका डक्टर के.जी. गुरु प्रसादले आफुलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै प्रहरी समक्ष उजुरी दिएकी हुन् । श्रुतीले उजुरीमा आफुलाई निज गुरु प्रसादले सेप्टेम्बर सात देखि ट्विटरमा निकै सताएकोृ बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्,‘गुरु प्रसादले मलाई...
बलिउड नायक अक्षय कुमार यतिबेला चर्चामा रहेका छन् । उनि चर्चामा आउनुको कारण हो, ट्वाइलेटसँग लिएको सेल्फि भाइरल । अक्षयले ट्ववाइलेटमा लिएको यो तस्बिर आफ्नो फेसबुक मार्फत फ्यानहरुलाई सेयर गरेका छन् । सामाजिक सन्जालहरुमा भाइरल बनेको यो तस्बिरमा दम लगाकर हैंसे चलचित्रकी अभिनेत्री भुमी पेढनिकर पनि देख्न सकिन्छ । अक्षयले नयाँ चलचित्र ट्ववाइलेट एक प...
शाहरूख भन्छन – मेराे छाेरीलार्इ किस गर्नेकाे अाेठै उखेलिदिन्छु
एजेन्सी। छोरीलाई कसैले किस गरे उसको ओठ उखेलिदिने बलिउडका सुपरस्टार शाहरुखले बताएका छन्। करन जोहरको ‘कफी विथ करन सीजन-५’ को पहिलो गेस्ट बन्न शाहरुख र आलिया भट्ट पुगेका थिए। ६ नोभेम्बरमा टेलिकास्ट हुने कार्यक्रमको सार्वजनिक भएको प्रोमोमा करनले शाहरुखलाई सोध्दछन्, ‘यदि कोही सुहानालाई किस गर्न भने के तिमी उसको ज्यान लिन्छौ?’ जवाफमा शाहरुखले भने ...
ऐश्वर्याको वोल्ड सिनमा अभिषेकको यस्तो प्रतिक्रिया : जसले सबैलार्इ बनायाे चकित
एजेन्सी । ‘ए दिल है मुस्किल’ मा ऐश्वर्या र रणवीर कपुरवीचको बोल्ड सिनका वारे अभिषेक बच्चनको रियाक्शनको प्रतिक्षा भइरहेको थियो । यही बेला उनले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । अभिषेकले फिल्म ‘ए दिल है मुस्किल’ मा ऐश्वर्या शारदार राम्री देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । इन्डियन सुपर लिग अन्तर्गतको फ्रेंचाइजी चेन्नइयन एफसीका मालिकहरू मध्येकाएक अभिषे...